आर्थिक वर्ष नसकिदै वीरगञ्ज भन्सारको राजश्व लक्ष्य पुरा - Himalkhabar.com
अर्थ/बजारबिहीबार, जेठ २३, २०७०
चालु आवमा रु. ५७ अर्ब ८१ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा १६ जेठमै रु. ५७ अर्ब ९३ करोड राजश्व संकलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख रामहरी अर्यालले जानकारी दिए । आउँदो डेढ महिनामा थप ७÷८ अर्ब रुपियाँ संकलन हुने उनको अपेक्षा छ ।
यस आवमा मोटरसाइकल आयात गतवर्ष भन्दा ३५ प्रतिशतले बढी छ । हालसम्म रु. ६ अर्ब ६९ करोड बराबरको १ लाख ५३२ वटा मोटरसाईकल आयात भएको र त्यसबाट रु. ६ अर्ब ८५ करोड राजश्व संकलन भएको छ । हलुका सवारी साधनअन्तर्गत जीप, कार भ्यान ३१ प्रतिशत बृद्धि ३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया बराबरको ६ हजार ४ सय ८८ वटा आयात भएका छन् । जसबाट रु. ७ अर्ब ८९ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
सवारी साधनसँगै चालु आवमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि उच्च दरले बढेको छ । पछिल्ला २÷३ आवमा आयात गरिएका सवारी साधन भन्सार यार्डमै थन्किने गरेकोमा यस बर्ष त्यो अवस्था नरहेको र ल्याएकै दिन जाँचपास भईरहेको प्रमुख अर्यालले बताए । कम्युटर प्रविधिबाट भन्सार जाँचपास हुन थालेपछि चुहावट समेत घटेको उनको भनाइ छ । देशको कूल भन्सार राजस्वको ५२ प्रतिशत राजस्व वीरगञ्ज भन्सारले संकलन गर्दछ । यो भन्सार भएर आयात हुने सामानहरुमा ६८ प्रतिशत भारत र बाँकी अन्य देशका रहन्छन् ।